2 Bed Flat Iyathengiswa ENorth London, London
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » London » 2 Bed Flat Iyathengiswa ENorth London, London1
United Kingdom, London, North London, Muswell Hill, N10 3nq
Ikhodi Yokuposa: N10 3nq
Izici: Retirement Flat in Lift Serviced Block for the over 55's, Two Bedrooms, Spacious Lounge, On-suite shower room, On-Site Manager, Guest Suite, Communal Lounge, On-site Laundry Room, Own door leading to well-kept Communal Garden
Indlu enamakamelo amabili okulala efulethini elisezingeni eliphansi enokuphakanyiswa komphakathi ebhlokini. Isakhiwo sinendawo yokuphumula enkulu, ikhishi elihlukile, igumbi lokulala eliphezulu elinendawo yokugeza en-suite igumbi lokulala lesibili elilinganiselwe kanye nendlu yokugezela ehlukile. Leli fulethi linomnyango walo oholela engadini yomphakathi egcinwe kahle, ehlelwe kahle yokuthokozisa bonke abahlali. Kukhona nokungena egumbini lokuphumula lomphakathi kanye negumbi lokuwasha endaweni. Kukhona futhi indawo yokupaka emgwaqeni lapho ufika khona okokuqala. IBishop View Court iyintuthuko efunwayo enkabeni yeMuswell Hill ebangeni nje elingamamitha ayi-100 ukusuka eBroadway enezitolo zayo eziningi, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle. Kunemizila yamabhasi eseduze eya eHighgate Station, kanye naseHighgate Woods nase-Alexandra Palace kanye nepaki eduzane
, N10 3nq
&nbspNorth London in London, N5 2pb
&nbspNorth London in London, Ec1v 2nr
&nbspNorth London in London, Nw3 2pb
&nbspNorth London in London, En3 6ay
&nbspNorth London in London, N15 5hf
Izikole eziseduzane N10 3nq